جمعه , 22 جنوري, 2021
ဒီနေ့မှာတော့ အမေရိကန် နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးအေဂျင်စီ (USAID) ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အားကောင်းလာစေဖို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ သိသာထင်ရှားတဲ့ကတိကဝတ်ကို ကြေညာရာမှာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနဲ့ ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၅ ခုနှစ်ထိ ၄င်းတို့ရဲ့ (၅) နှစ်တာ မဟာဗျူဟာ အစီအစဥ်ကို စတင်မိတ်ဆက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဌာနအားလုံးမှာ ခေတ်မှီတိုးတက်ပြီး နိုင်ငံတကာက လက်ခံတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို ကျင်းသုံးခြင်းအားဖြင့် ဒီအစီအစဥ်ဟာ ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ်ရုံးရဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တွေကို တည်ဆောက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြိုးစားအားထုတ်မှုဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာကို မိမိတို့အားလုံး နားလည်ပြီး၊ ချီးကျူးမိပါတယ်။ ဒီမဟာဗျူဟာအစီအစဥ်ကို ရေးဆွဲဖို့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကို ထောက်ပံ့ပေးရာမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနဲ့ ပူးပေါင်းခွင့်ရလို့ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အားကောင်းလာစေဖို့ အစိုးရအနေနဲ့ ကြိုးပမ်းရာမှာ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးဟာ အဓိကအကျဆုံးအင်စတီကျူးရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ USAID၊ မိမိတို့ရဲ့ တရားရေးဌာနနဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရာဝန်ကြီးဌာနက တဆင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ပြည်သူတွေဟာ အားလုံးအတွက် တရားမျှတမှုကို ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်မယ့် ပန်းတိုင်ကို ရောက်ရှိဖို့အတွက် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို မြှင့်တင်ဖို့ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။
Today the U.S. Agency for International Development, USAID, joins with the Union Attorney General's Office in announcing the United States Government's significant commitment to strengthening the rule of law for the people of Myanmar.
Human trafficking isapervasive and heinous crime. It is taking place in many places around the world, from countries with rampant organized crime like Libya and Nigeria to alleged state-sponsored trafficking in Cuba.
Remarks by Deputy Assistant Administrator for Asia Craig Hart at the “U.S. Congress and the Legacies of the Vietnam War” Stimson Center Event
USAID hasalong-standing commitment to address legacies of the Vietnam War. While our colleagues in the Department of State focus on UXO demining, USAID works to assist people with disabilities and clean up sites contaminated by Agent Orange during the Vietnam War.
The world is experiencing an unprecedented shift in the global economic landscape. With global supply chains disrupted by the pandemic, e-commerce and digital platforms have become even more important for small and medium enterprises in the countries where we work.